CBD na Ahụike | Nhọrọ Ahụike Gị kacha mma na 2020
CBD na Ahụike
CBD na Uru Ahụike
CBD na Njirimara Mmezi Ahụike
Ọnọdụ ejiji na -apụkarị n'anya, mana CBD nọ ebe a. N'ezie, ejirila cannabis eme ihe ruo ọtụtụ puku afọ maka ebumnuche dị iche iche, ọkachasị nke ọgwụ. Iji nye gị echiche, mbụ izizi cannabis na -eji ụbọchị 2300 BC, n'akwụkwọ China akpọrọ Shu King. Ha jiri ya mee eriri na uwe yana ịgwọ ọrịa ogbu na nkwonkwo na nnukwu mgbu mgbu ịhụ nsọ. Mgbanwe nke osisi a abụghị ihe ọhụrụ.
Agbanyeghị na o doro anya na CBD na -aga ugbu a oge kacha mma, anyị chọrọ iche na ọ na -eme n'ihi na, n'ikpeazụ, na mgbe ọtụtụ afọ gachara, ozi doro anya na nke ọma gbasara akụrụngwa cannabis Sativa dị ugbu a. Mmụba n'ọmụmụ ihe nke na -eto ma na -akwado abamuru nke akụrụngwa a, yana mbipụta ha, enyerela aka ikwenye ihe ọtụtụ mmadụ na -enyo enyo mbụ: CBD nwere ọtụtụ uru ahụike.
CBD ma ọ bụ cannabidiol bụ cannabinoid achọtara na osisi cannabis. N'ime ihe karịrị otu narị cannabinoids dị na afọ Osisi Sativa, ọ bụ akụrụngwa kacha agụ akwụkwọ, nwere ikike ọgwụgwọ kachasị na sistemụ anyị na -etinye ya nke ọma. Ibu ọrụ maka mmịpụta a bụ ndị na -anabata cannabinoid dị na sel n'ime ahụ mmadụ niile, ọkachasị n'ụbụrụ na sistem. Nri CBD na -eme ka ndị na -anabata cannabinoid rụọ ọrụ ma kegide n'elu sel, na -eduga na sistemụ endocannabinoid na -arụ ọrụ nke ọma.
Ma, ugbu a, ị ga na -eche ihe bụ sistemụ endocannabinoid yana maka ya? Agbanyeghị na ọ bụ usoro dị mgbagwoju anya, anyị nwere ike ichikota na sistemụ a na -etinye aka n'ọtụtụ usoro ọmụmụ anụ ahụ, dị ka nhazi nke nghọta mgbu, yana ọrịa obi, eriri afọ na imeju, nke na -eme CBD na ahụike. nwee njikọ chiri anya.
Mana ugbu a, ka anyị kwuo maka ihe mere eme. Kedu ka CBD ga -esi nyere m aka? Ngwa ọgwụ nke ihe a dị ọtụtụ ma amachaghị. Na sayensị, egosila na ọ na-ebelata ma na-egbochi mbufụt na ọgbụgbọ, ọrịa shuga, ehighị ụra nke ọma, nsogbu nrụgide post-traumatic, schizophrenia, ọrịa ogbu na nkwonkwo, ọrịa obi, antipsychotic, anxiolytic, na ọbụna analgesic, megide mgbu neuropathic na spasms akwara. na -esiwanye ike ịgwọ ọgwụ ndị ọzọ, ọbụlagodi na ọgwụ. Ọ bụkwa ọgwụgwọ siri ike maka akwụkwụ, otutu sclerosis, yana ịlụ ọgụ nke agụụ. Ọzọkwa, n'adịghị ka THC, Nnukwu CBD abụghị ihe na -emetụta mmụọ, na ntụle, ọ nwere mmetụta nzere na udo. Ịtụnanya eziokwu?
Ugbu a ị nwere ike na -eche ebe ị ga -ahụ ụdị ngwaahịa a? Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ amalitela njem CBD mana ọ bụ naanị mmadụ ole na ole nwere ike igboju ọkwa nke ndị na -azụ ahịa chọrọ. Obi abụọ adịghị ya, Red Emperor CBD bụ otu n'ime ndị nkesa CBD a pụrụ ịtụkwasị obi. Ụlọ ọrụ na-eto eto nke ngwaahịa ya karịrị atụmanya nke onye ọ bụla maara ka esi amata ọdịiche dị n'etiti ngwaahịa adịchaghị mma na nke dị elu. Ma na ụtọ na isi nke ifuru ya siri ike, ị nwere ike nwee ekele maka nlekọta nke ịkụ hemp ụlọ ọrụ, na -enyocha nke ọma na nke emepụtara ọnọdụ kacha mma iji nweta ngwaahịa kacha mma. N'ihe na -erughị 0.3% THC n'ụdị ya niile, ngwaahịa Red Emperor CBD niile sitere na ịkọ hemp ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Mmanụ CBD sitere na Red Emperor CBD nwere ike ịbụ ezigbo azịza maka gị. Ngwa sublingual, mmanụ a zuru oke nwere ike inyere gị aka ịrahụ ụra, yabụ, nwee ahụ iru ala zuru oke, nke siri ike iru na ọkwa nrụgide ma ọ bụ nchegbu. Ọ dịkwa oke irè megide mgbu ma nwee ike bụrụ ihe ọzọ na -ebelata ihe mgbu. N'ime ngwa ndị a nwapụtara, nke onye ọkachamara na -elele yana na usoro ụfọdụ, egosiri na ọ na -eme ka ndụ ndị mmadụ na -arịa ọrịa Parkinson na Akwụkwụ na -adị mma.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, ọ dịghị mkpa iji ọgwụ riri ahụ nwere mmetụta na -emerụ ahụ. Ị nwere ike ịnwale CBD na ahụike gị ga -akawanye mma. Nature mara ihe ma na-enye anyị ihe niile dị anyị mkpa maka ahụike na ọdịmma anyị, gịnị ma ị rite uru na ya?
PreviousPrevious post:Gịnị bụ mmanụ CBD? | Ngwaahịa kacha mma maka 2021OsoteNext post:Nlekọta anụ ahụ CBD na Sam Cheow, onye bụbu Laurel etemeete VP